» लक डाउनमा केविन ग्लान तामाङको अपरेसन, यसरी बित्दैछ ९ प्रतिस्पर्धीको दिनचर्या
लक डाउनमा केविन ग्लान तामाङको अपरेसन, यसरी बित्दैछ ९ प्रतिस्पर्धीको दिनचर्या
३१ जेष्ठ २०७७, शनिबार १६:०८
मकवानपुर, ३१ जेठ । नेपालमा लक डाउन भएसँगै चर्चित सिंगिङ रियालिटी शो नेपाल आईडल सिजन ३ रोकियो । प्रतियोगिता रोकिएसँगै प्रतियोगिताको उत्कृष्ट ४ मा पुगेका प्रतियोगीहरु र वाईल्ड कार्डमा भिडेका ५ प्रतियोगीहरु कोही आफ्नो घर फर्किएभने कोही काठमाडौँमै आफन्तकोमा बसे । उनीहरुमध्ये कोही प्रतियोगीहरुको दिनचर्या राम्रै बित्यो भने कोहीका लागि पिडादायी पनि सावित भयो । प्रतियोगीहरुमध्ये केविन ग्लान तामाङ पिडामा परे भने केहीले पारिवारिक आनन्द उठाए । तीमध्ये केही प्रतियोगीहरुले लकडाउनकै बेलामा नयाँ गीत पनि सार्वजनिक गरे । यी ९ प्रतियोगीहरुमा कसको कस्तो दिनचर्या बित्दैछ ? यस भिडियो सामग्रीमा हामी यसै विषयमा चर्चा गर्दैछौँ । यस सामग्री तयार पार्नका लागि सम्पूर्ण साप्ताहिकमा प्रकाशित सामग्रीको पनि सहयोग लिइएको छ । हेर्नुहोस् भिडियो–
नेपाल आईडलको उत्कृष्ट ४ सम्म पुगिसकेका केभिन ग्लान तामाङलाई लकडाउनको समयमा नै पिडा भोग्नुपर्यो । लक डाउनभएसँगै प्रतियोगिता रोकिएपछि अन्य प्रतियोगीहरुजस्तै केविन ग्लान तामाङ पनि आफ्नो घर चितवनतिर लागेका थिए । घरमा फर्किएपछि अचानक उनले स्वास्थ्य समस्या भोगे ।एपेण्डिसाईट्स दुख्न थालेपछि डाक्टरको सल्लाहमा उनको अपरेशन गरियो । अपरेशन भएसँगै उनी अहिले बेड रेष्टमा छन् । घरमै आरम गरिरहेका उनी बिस्तारै निको भईरहेको उनी बताउँछन् । अपरेशन लगत्तै गीत गाउन नसकिने भएकोले उनले त्यो समय अरुको गीत सुनेर बिताए । अपरेशन भएको समय बितेसँगै उनी अहिले बिहान बिहान उठेर रियाज गर्छन् । लकडाउनका कारण उनले रिकभर हुने मौका समेत पाएको उनी बताउँछन् । उनी लकडाउनमा बाहिर निस्कन नपाउँदा दिक्क लागेको बताउँछन् तर सरकारले हाम्रै स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि लकडाउन गरेकोले यसको पालना गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । नेपाल आईडल सिजन ३ को उपाधी दाबेदारमध्येका एक प्रतियोगी हुन् केविन ग्लान तामाङ । केविनले नेपाल आईडल सिजन ३ को उत्कृष्ट ४ सम्म पुग्दा ७ वटा अवार्ड जितेका छन् । उनले ४ वटा अपलिफ्टीङ पफोर्मेन्स अफ द डे अवार्ड, २ वटा ग्लामर मोमेन्ट अफ द विक अवार्ड र १ वटा रेस्पेक्ट पफोर्मेन्स अफ द विक अवार्ड जितेका छन् । केविनले उत्कृष्ट ८ को प्रस्तुति र उत्कृष्ट ५ को प्रस्तुति पश्चात खुलेको भोटिङमा गरी दुई पटक सर्वाधिक भोट समेत प्राप्त गरेका थिए । उनी उत्कृष्ट ४ मा आईपुग्दासम्म एक पटक पनि बटम लाईनमा परेका छैनन् ।
लक डाउन सुरु भएसँगै उत्कृष्ट ४ मा पुगेका नेशन पुन मगरको दैनिकी पनि घरमै बितिरहेको छ । उनी घरमा बस्ने समयलाई एउटा कलाकारको सिर्जन ागर्ने समयका रुपमा ब्याख्या गर्छन् । उनले लकडाउनकै समयमा पनि विभिन्न प्रोजेक्टमा काम थालेका छन् । नेशनको प्राय दिनमा दुई पटक साँझ र बिहान रियाजमै बित्छ । खाने, सुत्ने र उठ्ने आफ्नो दैनिकी नै बनेको उनी बताउँछन् । त्यसबाहेक उनी बहिनीसँग खेलेर पनि समय बिताउँछन् । उनलाई दिन बिताउन त्यति समस्या नभएको उनी बताउँछन् । संसारभरि फैलिरहेको महामारीबाट बच्न संयमित हुनु आवश्यक भएको बताउँदै उनले यस समयको सदुपयोग गरियो भने त्यसले पक्कैपनि फाइदा दिने बताउँछन् । सुखमा मात्तिने र दुःखमा आत्तिनेभन्दा पनि संयमित भएर घरमा बसेर महामरीको विरुद्धमा लड्न सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । कभर गीतहरु र ब्याण्डमाबाट चर्चामा आएका नेशनलाई प्रशंसकहरुमाझ नेपाल आईडल सिजन ३ को उपाधी दाबेदारका रुपमा हेरिएको छ । नेशनले अहिलेसम्म ७ वटा अवार्ड जितेका छन् । उनले २ वटा ग्लामर मोमेन्ट अफ द विक अवार्ड, ४ वटा अपलिफ्टीङ पफोर्मेन्स अफ द डे अवार्ड र एउटा रेस्पेक्ट पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड पनि जितेका छन् । उनले दुई पटक सर्वाधिक भोट पनि प्राप्त गरिसकेका छन् । उनी पनि अहिलेसम्म बटम लाईनमा परेका छैनन् ।
उत्कृष्ट ४ मा पुगेका अर्का प्रतियोगी प्रविण बेड्वालको दैनिकी अलिहे परिवर्तन भएको छ । लकडाउन हुनुअघि करिब तीन महिनादेखि उनी नेपाल आइडलको प्रतिस्पर्धाको बिजी सेड्युलमा थिए । दैनिक अभ्यास र सुटिङमा बिताएको त्यो समयमा आफुले फोनमा कुरा गर्न समयसमेत नपाएको उनले महशुस गरेका थिए । तर लकडाउनपछि सबै आ–आफ्नो घरमा फर्किए । सबै घरमा फर्किए पनि उनी भने घरमा जान सकेनन् किनभने उनको घर निकै टाढा छ । उनी काठमाडौँमै आफ्नी फुपुको घरमा बसे । घरबाट बाहिर निस्कन नपाएकोले बोर लागेको उनी बताउँछन् । उनीसँग पियानो भएका कारण त्यसैमा आफुले रियाज सुरु गरेको उनी बताउँछन् । लकडाउनले बोर बनाएता पनि उनी लकडाउनले एउटा फाइदा पनि गरेको बताउँछन् । आइडलमा हुँदा म्यासेज र कमेन्टको रिप्लाई दिन नभ्याएका प्रविणलाई धेरै साथीहरुले म्यासेज किन रिप्लाई नगरेको भनेर सोध्थे तर अहिले उनी सबैको म्यासेज दिन पाएकोमा खुशी छन् । यो बिचमा उनको नक्कली आईडी बनेको कुराले पनि चर्चा पायो । उनको नाममा नक्कली फेसबुक आईडी बनाएर गलत काम गर्न पुगेका एक व्यक्तिले उनीसँग माफी पनि मागे । नेपाल आईडल सिजन ३ को बलिया हकदारका रुपमा देखिएका उनलाई निर्णायकहरुले संगीतको उस्तादको संज्ञा समेत दिएका छन् । बर्दियाका प्रविण नेपाल आईडल सिजन ३ मा ऐतिहासिक प्रस्तुति दिने प्रतियोगी हुन् । प्रविणले नेपाल आईडलको स्टेजमा अहिलेसम्म ८ वटा अवार्ड जितेका छन् । उनले ६ वटा अपलिफ्टीङ पफोर्मेन्स अफ द डे अवार्ड प्राप्त गरेका छन् भने २ वटा रेस्पेक्ट पफोर्मेन्स अफ द विक अवार्ड प्राप्त गरेका छन् । प्रविणले गाला राउण्डको उत्कृष्ट ७ को प्रस्तुतिपश्चात खुलेको भोटिङमा सर्वाधिक भोट समेत प्राप्त गरेका थिए । प्रविणले अहिलेसम्म २ पटक बटम ३ को सामना गरेका छन् ।
प्रतियोगिताको सर्वाधिक अवार्ड विजेता सज्जा चौलागाईं पनि अहिले घरमा नै बसिरहेकी छिन् । संकटको बेला भएको भन्दै उनी आफ्नो दिनचर्या सुत्ने, उठ्ने, खाना खाने, गीत सुन्ने र गाउने गरेर बितेको बताउँछिन् । लकडाउनको समयमा उनी गितार पनि सिक्दैछिन् । लकडाउन अगाडि निकै व्यस्त जीवन गुजारेकी सज्जाका लागि यो ग्याप सदुपयोग गर्ने समयको रुपमा प्राप्त भएको छ । व्यस्त जीवनको बिचमा आएको यो फुर्सदको समय आफुलाई खासै बोर महशुस नभएको उनी बताउँछिन् । उनी यो समयलाई सबैले घरमै बसेर सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छिन् । सज्जालाई धेरैले पहिलो महिला नेपाल आईडलका रुपमा समेत अपेक्षा गरेका छन् । उत्कृष्ट ४ सम्म आईपुग्दा उनले ११ वटा अवार्ड जितेकी छिन् । सज्जाले ४ वटा रेस्पेक्ट पफोर्मेन्स अफ द विक अवार्ड, २ वटा ग्लामर मोमेन्ट अफ द डे अवार्ड र ५ वटा अपलिफ्टीङ पफोर्मेन्स अफ द डे अवार्ड जितेकी छिन् । सज्जाले अहिलेसम्म दुई पटक बटम ३ को सामना गरेकी छिन् ।
लक डाउनपछि घर फर्किएका किरणकुमार भुजेलले पनि यो समयको सदुपयोग गरे । उनले यसै समयमा ‘साथी’ बोलको गीतको म्युजिक भिडियो पनि सार्वजनिक गरे । लकडाउनका समयमा घरआसपासमै खिचिएको भिडियोलाई दर्शकले पनि मन पराएका छन् । लामो समयदेखि घरपरिवारसँग बस्न नपाएका किरणलाई परिवारसँग समय बिताउन पाउँदा निकै मज्जा लाग्यो तर गुलियो पनि बढी खायो भने तीतो हुन्छ भनेझैँ लकडाउन लम्बिँदै जाँदा उनी दिक्क लाग्न थालेको बताउँछन् । लकडाउनमा गीत सुनेर आनन्द लिइरहेको बताउने किरण गीत गुनगुनाउएर समय बिताउँछन् । लकडाउन सकिएपछि आईडल सुचारु हुने आसामा रहेका उनी त्यसको तयारीमा पनि लागेका छन् । नेपाल आईडल सिजन ३ को वाईल्डकार्ड ईन्ट्री पाउने बलियो सम्भावना भएका किरण यसअघि नेपाल आईडलको उत्कृष्ट ७ सम्म पुगेका थिए । किरणले नेपाल आईडलमा अहिलेसम्म ४ वटा अवार्ड जितेका छन् । उनले गाला राउण्डमा २ वटा अपलीफ्टीङ पफोर्मेन्स अफ द डे अवार्ड र एउटा रेस्पेक्ट पफार्मेन्स अफ द विक अवार्ड जितेका थिए । साथै वाईल्डकार्डमा उनले अपलीफ्टीङ पफोर्मेन्स अफ द डे अवार्ड जितेका थिए ।
वाईल्डकार्ड राउण्डमा भिडेकी ममता गुरुङको लकडाउन अनुभव पनि सुखदायी बितेको छ । वैशाखमा प्लस टूको परीक्षा स्थगित भएपछि उनी लकडाउनको समयमा पनि परीक्षाको तयारीमा जुटिरहेकी छिन् । दिनभर पढेर बस्न नसकिने भन्दै उनले फ्रेस हुनकालागि आफुले गीत सुन्ने गरेको बताउँछिन् । बिहान पढाईमा ध्यान दिने ममताले बेलुकातिर रियाजमा समय दिन्छिन् । दिउँसोको समयमा घरका सबैजना एक ठाउँमा बसेर फिल्म हेर्दै समय बिताउने गरेकी ममताले अहिले चोकसम्म बाहिर निस्कन पनि पाएकी छैनन् । लकडाउन अघि चोकमा तरकारी किन्न गएको र साथीसँग गफ गरेको यादले उनलाई सताउँछ । ती दिनसँग लकडाउनको दिनलाई तुलना गर्दा उनलाई यी दिनहरु दिक्क लाग्दो दिन सावित भएका छन् । सबैसँग भेट्ने मन भएको बताउने ममताले अहिलेको समय सामाजिक दुरी कायम गर्नु नै उचित हो भन्ने पनि बुझेकी छिन् । यसअघि उत्कृष्ट ९ सम्म पुगेर बाहिरिएकी ममता गुरुङले उत्कृष्ट ९ मा पुगेसँगै ग्लामर मोमेन्ट अफ द विक अवार्ड जितेर शोबाट बाहिरिएकी थिईन् ।
वाईल्ड कार्ड राउण्डमा भिडेकी मेघा श्रेष्ठको लकडाउनको समय फेसबुक लाईभसँगै रियाजमा बितेको छ । नेपाल आइडलमा व्यस्त भएकाले घरपरिवार, आफन्त र शुभचिन्तकसँग दोहोरो कुराकानी गर्न नपाएकी मेघाले लकडाउन भएपछि दुईतीन पटक फेसबुकबाट लाइभ समेत गरेकी छिन् । सबैसँग बोल्ने, नजिक हुने मौका समेत उनले पाएकी छिन् । लकडाउनका समयमा दैनिक रियाजमा बिताउने गरेकी उनलाई क्याम्पस पढ्दाका दिनमा गरिएका रेकर्डिङहरु सुन्ने समय पनि मिलेको छ । क्याम्पमा सरगम बजाएर गीत गाउने अभ्यास गरेकी मेघाले ती सबै साउन्ड रेकर्ड गरेकी थिईन् । अहिले उनी त्यही सुन्दै गीतको तयारी गरिरहेकी छिन् । लकडाउन हाम्रो सुरक्षाका लागि हो भन्ने बुझेकी मेघालाई खासै बोर नलागेको उनी बताउँछिन् । सिजन ३ की एकमात्र गोल्डेन माईक विजेता मेघा यसअघि उत्कृष्ट ५ सम्म पुगेकी थिईन् । मेघाले गोल्डेन माईकसँगै गाला राउण्डमा ८ वटा अवार्ड जितेकी छिन् । मेघाले ३ वटा ग्लामर मोमेन्ट अफ द विक अवार्ड, ३ वटा अपलिफ्टीङ पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड र २ वटा रेस्पेक्ट पर्फोमेन्स अफ द विक अवार्ड जितेकी छिन् ।
वाईल्ड कार्ड राउण्डमा भिडेकी मिग्मा लामालाई लकडाउनको समयमा आफ्नो भन्दा पनि अरुको चिन्ताले सताएको छ । लकडाउनका कारण कतिपयको रोजीरोटी गुमेको र मान्छेहरु हिँडेर सयौँ किलोमिटरको यात्रामा निस्किएको सुन्दा उनी दुःखी हुन्छिन् । यसतर्फ सरकारको चासो जानुपर्नेमा उनी जोड दिन्छिन् । उनी लकडाउनको समयमा बिहानै उठेर फ्रेस हुँदै रियाज गर्छिन् । उनी गीत लेख्ने तयारीमा समेत छिन् । उनी यसअघि उत्कृष्ट १० सम्म पुगेकी थिईन् । उनले प्रतियोगितामा ३ वटा अवार्ड जितेकी छिन् । मिग्माले एउटा ग्लामर मोमेन्ट अफ द उईक अवार्ड र २ वटा अपलिफ्टीङ पफोर्मेन्स अफ द डे अवार्ड जितेकी छिन् ।
वाईल्ड कार्ड राउण्डमा प्रतिस्पर्धा गरेकी रचना रिमालको लकडाउनको समय रियाजमै बितेको छ । बिहानै उठेर रियाज गर्ने गरेकी रचना त्यसपछि खाना खान्छिन् र दिनभर कलेजको टेक्स्ट बुक पढ्छिन् । परीक्षाको तयारी गर्दै गरेकी रचना बेलुका हार्माेनियममा गीत अभ्यास गर्छिन् । बाहिर निस्कन मन लागेतापनि घरमा बस्नु नै उचित हो भनेर उनले बुझेकी छिन् । सुरु–सुरुमा घरभित्र मात्र बस्दा गाह्रो भएको बताउने उनले अहिले भने यो बानी नै भएको बताउँछिन् । गाला राउण्डको तेस्रो, चौथो र पाँचौँ हप्तामा गरी ३ पटक सर्वाधिक भोट प्राप्त गरेता पनि उनी उत्कृष्ट ८ सम्ममात्र पुग्न सफल भएकी थिर्इंन् । रचनाले वाईल्डकार्डमा ग्लामर मोमेन्ट अफ द विक अवार्ड जित्न सफल भएकी थिईन् । आदरणिय दर्शकविन्द तपाईको विचारमा नेपाल आईडल सिजन ३ को विजेता को बन्नेछ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।